သြဂုတ်လအတွက် ငှားရမ်းဖတ်ရှုနိုင်သော စာအုပ်၊ ဂျာနယ်များစားရင်း
Posted By: Drigovon: August 03, 2018 In: Department of Research and Innovation(Head Office), News / Events, Technical Information Center
572.2 Analysis of Antioxidant-Rich Phytochemicals. 2012. A 532 ( Acc No. 19311 ) 502....	Read more
ဇူလိုင် လ အတွက် ဌားရမ်း ဖတ်ရှုနိုင်သော စာအုပ် ၊ဂျာနယ်များ
Posted By: Drigovon: July 05, 2018 In: News / Events, Technical Information Center
သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနတွင် ဇူလိုင်လ အတွက် အောက်ဖော်ြပပါစာအုပ်၊ ဂျာနယ်များ ဌားရမ်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ 664.0015 Fermentation : effects on food properties. 2012. F 345 ( Acc No. 193...	Read more
ဇွန်လအတွက် ဌားရမ်းဖတ်ရှုနိုင်သော စာအုပ်၊ ဂျာနယ် များစာရင်း
Posted By: Drigovon: June 05, 2018 In: News / Events, Technical Information Center
664.07 Analysis of Pesticides in Food and Environmental Samples. 2008. A 532 ( Acc No. 19315 ) 668.9 Conducting Polymers: synthesis, properties and applications. 2013. C 745 ( Acc No. 19317...	Read more